कांग्रेसको ४५ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको विवरण सार्वजनिक, कसरी हेर्ने विवरण ? – Saurahaonline.com
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले ४५ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
१४ औँ महाधिवेशनको तयारीमा लागेको कांग्रृसको केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले ४५ जिल्लाका ८० निर्वाचन क्षेत्रको क्रियाशील सदस्यको विवरण आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । कुनै पनि उजुरी नपरेका, पूरा विवरण पठाइसकेका र विवाद नरहेका जिल्लाको विवरण उजुरी वा गुनासो गर्ने र सच्याउन सकिने गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले बताउनुभयो ।
अहिले सार्वजनिक भएको विवरण नयाँ र नवीकरणसमेतको विवरण भएको बताउदै उहाँले यसमा कतिपय ठाउँको नयाँ र कतिपयको नवीकरण मात्रैको विवरण पनि रहेको जानकारी दिनुभयो । अर्थात जहाँ उजुरी परेको छैन, त्यहाँको मात्र विवरण सार्वजनिक गरिएको पौडेलले बताउनुभयो । उजुरी परेका ठाउँहरूको विवरण पछि सार्वजनिक गरिने उहााले जानकारी दिनुभयो । कांग्रेसले यसपटक सफ्टवेयरमार्फत क्रियाशील सदस्यताको विवरण इन्ट्री गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसअनुसार ७४ जिल्लाबाट साढे सात लाखभन्दा धेरैको नाम र विवरण सफ्टवेयरमा इन्ट्री भइसकेको छ । अहिले सार्वजनिक भएकामा अन्य पार्टीबाट समायोजन भएर आएकाहरूको विवरण भने संलग्न छैन । केन्द्रीय समितिले नै वैशाख मसान्तसम्म विवरण बुझाइसक्न निर्देशन दिएको सिन्धुपाल्चोक, सप्तरी, बारा र सोलुखुम्बुले अहिलेसम्म विवरण बुझाइसकेका छैनन् ।
कसरी हेर्ने विवरण ?
-कांग्रेसको वेबसाइट खोल्ने ।
-वेबसाइटको होमपेजमा रहेको क्रियाशील सदस्यता भन्ने मेनुमा क्लिक गर्ने ।
-रजिस्टर गर्ने र लगइन गर्ने ।
-त्यसपछि आफुले चाहेको वडाको क्रियाशील सदस्यताको विवरण हेर्न पाइनेछ ।